संस्कृति स्टोन, प्राकृतिक ढुone्गा, भित्ते ढु --्गा - LONGSHAN
लुज / अनियमित ढुone्गा
सांस्कृतिक स्टोन-VNS-१8०२ डीबी
१. यो स्थापना गर्न सजिलो छ, र सस्तो मूल्यको साथ। यस चम्किलो कालो रंग संस्कृति ढु stone्गा अन्य र otherको साथ धेरै सजिलोसँग मिल्दछ। यस उल्लेखनीय प्राकृतिक ढु with्गाको साथ तपाईंको डिजाईन पूर्ण गर्नुहोस्। २ ...
यस उत्पादनको लागि हामी यसलाई हिउँ सेतो प्यानल पनि भन्छौं, सतह हिउँ जस्तो देखिन्छ, जब घामको मुनि प्यानल हुन्छ, सतहमा केही चमकदार ठाउँ हुन्छ, यो धेरै सुन्दर देखिन्छ। यो विभाजित अनुहार फाइ ...
यो ढु the्गाको बजारको सब भन्दा लोकप्रिय उत्पादन हो, हामी यस उत्पादनलाई धेरै बर्षसम्म विश्वभर निर्यात गर्दछौं। नरम खैरो टोन ढु of्गाको प्राकृतिक विचरण र छाला द्वारा पूरक हुन्छन्। यू ...
यो प्राकृतिक स्लेट लेजर प्यानलमा गहिरो खैरो, ग्रे र रस्टको इशारा समावेश गर्दछ। हामी क्यामेरा विभिन्न रंग, समाप्त, बनावट, र शैलियों को साथ साथै कोर्नर टु coord्गो समन्वय प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं ...
यो उत्पादन बहुरंगा छ, यो धेरै सुन्दर देखिन्छ र सतह अझै पनी उत्पादन, काट्ने र सम्बन्ध संयोजन पछि अद्वितीय प्राकृतिक ढु stone्गा बनावट र रंग राख्छ। योdको लागी एक धेरै विकल्प हो ...
यो ढु the्गाको बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादन हो, सतह अझै पनी उत्पादन, काट्ने र सम्बन्ध संयोजन पछि अद्वितीय प्राकृतिक ढु stone्गा बनावट र रंग राख्छ। सम्पूर्ण प्यानल टी द्वारा बनाइएको थियो ...
१. यो stri स्ट्रिपहरू छन्, कुल लम्बाई cm० सेमी.इन.टरलॉक cm सेमी छ। नियमित आकार जेड र एस हो। मोटाई -15-१-15 एमएम हो, विट एकदम हल्का हुन्छ, त्यसैले यो बढी सजिलो बोकेको र निर्माण हो। २ पूरै पेन ...
१. ढु St्गा पातलो पर्खाल प्यानल ढु stones्गाको लामो पट्टिहरू हुन् जुन ढाँचामा मिलाइएको छ। तिनीहरू सँगै चिपकाइन्छन् बाहिरी क्लैडिंग र फायरप्लेस क्षेत्रलाई ढाक्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। टाइलको प्रत्येक सेटमा मिश्रण हुन्छ ...
हाम्रो उत्पादन मामला
लोन्शान ढु stone्गा सन् १ 198 88 मा स्थापित भएको थियो, १० मिलियन युआनको दर्ता पूंजीको साथ। चीनको बक्सिंग शहर, हेबैको यिक्सियनमा स्थापित। लांगशानलाई प्रशोधन, उत्पादन, बिक्री र सेवा सहितको आधुनिक कर्पोरेसन बन्नको लागि…
भविष्यमा, लhan्ग्शान स्टोन जहिले पनि "ईमान्दारिताका साथ मानिसहरूलाई व्यवहार गर्ने सिद्धान्तको पालन गर्दछ ...
अब लongs्ग्सन स्टोनले यसलाई मार्केटमा लन्च गर्यो, र धेरै राम्रो प्रतिष्ठा जित्यो।
Tel:+ 86-15130218520, + -1520-१-155444495 86२67।